नोट लेखेर मोरङमा १५ वर्षीय मन्जुले के गरिन् यस्तो ? परिवार र आफन्तमा रुवाबासी – Namaste Dainik
April 23, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नोट लेखेर मोरङमा १५ वर्षीय मन्जुले के गरिन् यस्तो ? परिवार र आफन्तमा रुवाबासी
विराटनगर । मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका – ४ सफेवास्थित एक बालिकालाई दुरूसाहन गरेर देह-त्या-ग गराउन बाध्य बनाएको आरोपमा दुई जना प*क्राउ परेका छन् । इलका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले दुरूसाहन मु*द्दामा दुई जना पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका ४ का २१ वर्षिय मदन लिम्बु र सोही ठाउँका २२ वर्षिय पारस राईलाई प-क्राउ गरिएको इप्रका उर्लाबारीका इन्स्पेक्टर सुवास राईले जानकारी दिए । प्रहरीले दुवै जनालाई मुलुकी फौजदारी संहिता दफा १८५ अनुसार अ-प-राध गर्न दु-रुत्सा-हन गरेको अभि-योगमा प-क्राउ गरेको छ ।
गत शनिबार १५ वर्षीय मन्जु नेम्वाङ्ग लिम्बुले नोट लेखेर दे-ह-त्या-ग गरेकी थिइन् । दे-ह-त्या-ग गरेकी बालिकाले नोटमा मदन र पारसका कारणले दे-ह-त्याग गर्नुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि पक्राउ गरिएको हो,’ इप्रका उर्लाबारीका प्रमुख राईले भने, ‘बुधबार दुरूसाहन मुद्दामा म्यात थप गरि अनुसन्धान अनुसन्धान गरिनेछ ।’
पीडित परिवारले सोमबार इप्रका उर्लाबारीमा किटानी जाहेरी दिएको मृ-तका आफन्त महेन्द्र थेगिमले बताए । घ-टनाको सत्यतथ्य छानविन गरि दोषीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता १८५.२ मा दे-ह-त्याग गर्न दुरुत्साहन दिने र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा दे-ह-त्या-ग गर्न बाध्य बनाएको पुष्टि भएमा कम्तिमा ५ वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
मृग नालीमा मृतवस्थामा फेला । कोरोना मानिस मा जस्तै जनवर मा पनि फैलियोको हो त ।